Date My Pet » 5 Tips kuti Great First Online Dating Kwazvo
5 Tips kuti Great First Online Dating Kwazvo
Last updated: Jan. 21 2021 | 3 Maminitsi verenga
Apo vanhu nezvazvo pakutanga, ivo pakarepo vanofunga chiso nechiso kuonana. zvisinei, nguva zvachinja, uye pakutanga uyewo nyaya yekudyidzana chete paIndaneti vachionana ... kunyanya kana totaura paIndaneti kufambidzana. uye, mitemo chiso nechiso pakutanga vakasiyana paIndaneti kufambidzana pakutanga.
Where Your Kwazvo First inoverenga: Your Profile uye Your Email
Kana vasarudze paIndaneti kufambidzana pamusoro nemakwenzi zvokufambidzana, chokutanga unofanira kuziva ndipo zvaunoyeuka kutanga kuenda basa. uye, zvaunoyeuka kutanga kuenda kuwanikwa zvose Profile dzenyu Email.
Panyaya Your Profile:
Kana unoziva nechakare, kwako Profile inofanira zvakanaka uye Dzinotangazve - hapana chinoratidza kuti uri wakasurukirwa kana wakaora (zvikuru chijana-kure vakadzi). Munoda nechokwadi inogara iyezvino, saka kunatsurudza kazhinji kana unofanira (kana kana zvinhu zvachinja muupenyu hwako). Iva nechokwadi muri rairatidza pamusoro mhando zvinhu zvaunofarira kuita pasina kupa mashoko akawandisa chaipo kure nechiremwaremwa. yeuka, uchida varambe vachifarira paunenge paemail neshure.
Panyaya Your Email:
ikozvino, kana waronga pamusoro emailing anogona "zuva", unofanira kuziva sei kunyora muurayi kuororwa Email. e kuti yaunotanga tuma unofanira kuva noushamwari uye kukoka; uri kutsvaka kuratidza wacho kuti uri dzinonakidza uye vanofanira akuzive. saka, chii kuti kuororwa mail kunotoreva?
Kana mukaona Profile mumwe munhu waunoda uye kusarudza zvaunoda kushandisa email navo, unofanira kuziva zvokutaura kuti guru kuororwa. Unofanira kutanga email kure pamwe zvinotevera, "Zuva kana manheru Good kana Hello (Username)". Iva nechokwadi chokuti munhu wacho Username zvakarurama Rinopereterwa - kuzvinyora pasi kana kuti. mhando iyi hwomukova anouya mhiri sezvo kudziya uye kukokwa.
Panyaya Pakunyora akakwana kuororwa Email, pano zano unofanira kuyeuka: zvakawanda chinhu pane ndima nhatu uye hapana ndima asingasviki maviri. Chinhu pfupi kana Generic haazombovi imi gwa, uye chinhu chakanyanya refu zvinoreva uri kuedza naJessica wakaipa.
Paunenge akatarisa pamusoro yavo Profile, hapana mubvunzo kuti aiva pachawo saka kutaura nawo email. Kana chiri chinhu shamisa kuti imi vaviri mugove zvakafanana, kuvaudza nezvazvo. Kunyange zvazvo vakawanda vacharerwa tarisa yenyu Profile mushure kuwana email kubva kwamuri (uye chokwadi, kwenyu Profile vanofanira taura zvako likes uye mabasa aunofarira), haufaniri kugara tichivimba ichi.
4 - Nezvemamiriyoni Profile-Nyatsonanga Detail
By zvino unofanira zvafukidza yavo Profile nokungwarira, saka kana iwe watanga kunyora email, taura chimwe chinhu chaicho nezvazvo. Funga kutaura pane ivo Ndagara kana firimu ivo ndamboona, nezvimwewo. uye kuva nemaonero akanaka pamusoro penyaya. Zvakakosha kuti iwe naJessica somunhu zvakanaka munhu kana uchida kuti vapindure shure.
5 - Bvunza One (Just One) Direct Mubvunzo
Zvakanaka kubvunza chete zvakananga mubvunzo saka iwe kuwana mhinduro shure. Zvakare mibvunzo yakawanda inogona kuonekwa sevari Nosy. Iva nechokwadi mubvunzo chinhu havana kumboita pakupindura.
Zvakakosha kuyeuka kuti kuumba kuororwa, zvose Profile yenyu email vanofanira kutarira kukoka - kuenda pamusoro pavo vose vane wakanaka Muzinga zino, kutsvaka chiperengo uye girama zvikanganiso. Iva akatendeseka muzvinhu zvose, uye kana ukanyora kuti kwokutanga Email, kuramba Vhuṱanzi - ndiwe, zera rako, kana waita takaroorana, vane vana, nezvimwewo.
waitwa pakutanga havasi chiso nechiso kuonana zvakare; vari vaishandisawo paIndaneti. With vamwe kufanofunga, unogona kusika kuororwa kuti anopiwa mhinduro uri kutsvaka.
pamusoro 10 Zvikanganiso Men Ita Kana Kubata Women Online